Maxamed Saalax Ciqaabta ALLE ayaa ku habsatay kaddib markii uu Liverpool darteed isaga Furay SOONKIISII - Wargane News
Home Sports Maxamed Saalax Ciqaabta ALLE ayaa ku habsatay kaddib markii uu Liverpool darteed...
Dhaawacii Maxamed Saalax ka soo gaaray Finalkii Champions League waa Ciqaab kaga timid Ilaahey kaddib markii uu ciyaar darteed u furay Soonkiisa, Mubarak al-Bathali ee ah Daaci u dhashay dalka Kuwait ayaa sidaa yiri.
Wiilka reer Masar ayaa markii hore sheegay inuu soomi doono isla markaana uu kulanka Real Madrid darteed u afuri doonin.
Balse, macallinka Jir dhiska Liverpool ayaa xaqiijiyay in Maxmed uu maankiisa badelay kaddib markii uu la hadlay shaqsiga nafaqeynta u qaabilsan kooxda.
Jimcihii iyo maalinka sabtida oo ay dhaceysay ciyaarta kama dambeysta Final ka Champions League ayaa la sheegay inuu Saalax afurnaa.
Yeelkeede, Mubarak al-Bathali ayaa u sheegay xiddiga Liverpool in Soonka uu waajib yahay isla markaana ay kubbada cagta aslanba ahayn wax sharci ah sidaa darteed aan soonka loo furi karin wuxuuna ugu baaqay inay weli u furan tahay Albaabka Towbada.
Mubarak al-Bathali ayaa boggiisa Twitter ku soo qoray:
“Walaal Maxamed Saalax wuxuu go’aasaday inuu ciyaaro isagoo Afuran Liverpool darteed sida uu isaguba caddeeyay, Ilaah ayaana Ciqaabay.
“Mid wax maleeya yuusan Moodin gaar ahaan Muslimiinta in Nolosha ay ku dhisan tahay Caqli iyo dadaal, balse Noloshu waxay ku jirtaa gacanta ilaahey, ciduu doono ayuuna siinayaa haddii uu dadaalo iyo haddii uusan dadaalinba.
“Ilaah haku soo hanuuniyo Maxamed Saalax, waxaana laga yaabaa in amarkii kugu dhacay uu kheyr u ahaa noloshaada dhinacyadeeda oo idil.”.
Somalia: Cholera outbreak kills 5 children in Southern Somalia